60,000.oo gaartay Kiisaska Coronavirus ee laga diiwan gelyay Africa - Awdinle Online
60,000.oo gaartay Kiisaska Coronavirus ee laga diiwan gelyay Africa
Wadarta kiisaska cudurka coronavirus ee Afrika ayaa si rasmi ah u gaadhay 60,657 maanta oo Aaxd ah iyada oo ay sare u kacday 2,911, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Xarunta Xakameynta iyo Ka Hortagga Cudurrada faafa ee Afrika (Afrika CDC).
Sida ku cad warbixinta cusub, 2,114 qof ayaa u dhintey COVID-19, halka 20,792 ay ka soo kabsadeen Xanuunka Coronavirus oo dhibaata ku haaya guud ahaan Caalamka.
Waqooyiga Afrika ayaa laga diiwaan galiyay kiisaska ugu badan oo ah 21,500, halka 17,900 laga diiwaan galiyay Galbeedka Afrika, 10,100 Koonfurta qaarada Afrika, 5,800 Bariga Afrika iyo 5,300 oo laga diiwaan galiyay Bartamaha Afrika.
Dhimashada ugu badan ayaa ah 1,200 Waqooyiga Afrika. Ilaa 385 dhimasho ayaa sidoo kale laga diiwaan galiyay galbeedka, oo ay ku jiraan 205 koonfurta, 182 bari iyo 100 Bartamaha Afrika.
In kabadan 7,700 bukaan ayaa kasoo kabsaday xanuunka woqooyiga qaarada, iyo sidoo kale 5,100 galbeedka Afrika, 4,200 South Africa, 2,200 Bariga Afrika iyo 1,600 Bartamaha Qaarada Afrika.
Koonfur Afrika ayaa sheegtay ilaa iyo haatan 9,400 kiis, halka 9,000 ay ka diiwaan galiyay Masar. Si kastaba ha noqotee, tirada dhimashada ee Koonfur Afrika ayaa aad u yar waana186, halka Masar ay ku dhinteen 514 dhimasho.
Galbeedka Afrika, Nigeria ayaa leh tirada ugu badan ee dhimashada oo ahayd 128, halka dhimashada ugu badan ee Bariga Afrika ay tahay Suudaan oo laga diiwaangaliyay 64, iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo oo xaqiijisay 41 waxa ay dhacdaa Bartamaha Afrika.
Marka laga hadlayo kiisaska, Gaana waxa ay ugu sarreeysay Galbeedka Afrika oo laga diiwaan galiyay 4,300, Jabuuti Bariga Afrika waxa ay diiwaan galisay 1,200, Cameroonna Bartamaha Afrika waxa ay diiwaangalisay 2,300 oo kiis.
Suudaan waxa ay diiwaan galisay 1,200 kiis, Soomaaliya 997, Kenya 649, Tanzania 509, Mauritania 332, Rwanda 280, Ethiopia 210, Madagascar 193, South Sudan 120, Uganda 116 iyo Eritrea 39.
Previous articleFanaan Saalax Carab oo dib u helay xoriyadiisa
Next articleSheeko la yableh Where is my Brother